Dzakamirira nguva dzeNike + mamodheru anowedzera kusvika Mbudzi | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti havazi vese vakakwanisa kutenga iyo modhi yavaida kubva Apple Yekuteedzana 4 Nike + mangwanani ano uye ndezvekuti mushure menguva iyo mawachi aivapo kuti aende kunotsvaga yeApple Chitoro, ikozvino zvinoita sekunge Apple yakaneta stock.
Uine rombo rakanaka uye zvichienderana nemuenzaniso waunoronga kutenga, unogona kuwana imwe muzvitoro, asi iko kutumirwa kweizvi kuri mune yakanakisa kesi yezuva regumi nemaviri remwedzi waMbudzi. Zvinotaridza kuti kutengesa kwakashanda nemazvo uye Apple inogona kuwana chipfuva zvakare neiyi smartwatch.
Uye ndezvekuti kunyangwe chiri chokwadi kuti vazhinji vevashandisi vaida kutenga Apple Watch Series 4 havana kusarudza iyo Nike + modhi, vazhinji vedu takamirira kusvikira zvino kuti titange kutenga uye pakupedzisira nhasi vanga vatengeswa. Zviripachena Apple haina kukwanisa kuchengeta stock kwenguva refu, kunyanya mumhando dzeLTE (Cellular) saka izvozvi zvinonetsa kubata imwe yadzo.
Kushivirira ndicho chinhu chega chatinogona kuraira parizvino kune avo vashandisi vaive vakamirira ino nguva uye avo nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe chikonzero vasina kukwanisa kuchengetedza yavo. Ehezve, izvi zvakanaka kune Apple, uye pamusoro pekutengesa zviuru zvemawatch, ine akawanda kwazvo pamitsetse yekugadzira zvekuti pavanongobva vatova nemuridzi wesangano. Nhasi muApple Stores kutenderera pasirese pasina mubvunzo chigadzirwa chakatengwa kwazvo chave chiri Apple Watch Series 4 Nike + pane yayo LTE modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dzakamirira nguva dzeNike + mamodheru anowedzera kusvika Mbudzi
Gadzira collage pane yako Mac nenzira yakapusa neMagicCollage
Apple Watch kana iPhone senzira yekuwana kuyunivhesiti